FAQ for volunteers during the Coronavirus Pandemic - Meals on Wheels
Su'aalaha FAQ ee tabaruceyaasha inta lagu jiro Faafida Coronavirus
Cunnooyinka Wheels waxay ku tiirsan yihiin kumanaan mutadawiciin ah inay cunto nafaqo leh u keenaan deriskeenna u baahan maalin kasta. Marnaba baahida adeegani waligeed ugama maarmin dad badan oo aan u adeegno oo si isa soo taraysa u go'doomay intii lagu jiray Coronavirus Pandemic.
Metro Meals on Wheels iyo la-hawlgalayaasheeda barnaamijku waxay qaadayaan taxaddarrada lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in gaarsiinta ay si ammaan ah u sii socon karto inta lagu jiro waqtigan adag. Akhriso jawaabaha su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee su'aalaha iskaa wax u qabso ah waqtigan:
Miyaan sii wadi karaa bixinta inta lagu jiro amarka joogitaanka guriga / hoyga?
Haa. Tabaruceyaasha Meals on Wheels ayaa bixinaya adeeg muhiim ah waana laga dhaafay amarka hoyga meel ku gabbasho Waxaan ubaahanahay mutadawiciin caafimaad qaba inay sii wadaan bixinta adeegan. Tani waxay khuseysaa labadaba gaarsiinta iyo mutadawiciinta jikada.
Sidee bay goobaha dirista cuntada iigu ilaalinaysaa si tabaruce ahaan waqtigan?
Cunnooyinka goobaha geynta giraangiraha ayaa nadiifinaya dhammaan walxaha loo isticmaalo gaarsiinta inta u dhexeysa isticmaalka.
Goobaha waxay ku hagaajiyeen qaadista cuntada si ay ugu oggolaato kala fogaanshaha bulshada ee saxda ah iyo in la yareeyo xiriirka qof-ka-qof.
Tabaruceyaashu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan tilmaamaha ay bixiyaan isku-duwayaasha gudbinta iyo xaashiyaha gudbinta si loo yareeyo isdhexgalka aan loo baahnayn ee u dhexeeya mutadawiciinta iyo kuwa cuntada qaata
Sideen ku qaban karaa qaybteyda iskaa wax u qabso si aan u hubiyo inaan u faafin fayraska dadka cuntada qaata?
Gacmaha Nadiifsan: Waxaan ka codsaneynaa darawalada inay gacmahooda dhaqaan ka hor dhalmada iyo mar kale markay dhammeeyaan keenista maalinta.
BILAASHA AMMAAN Markay suurogal tahay, cunnada kaga tag albaabka oo wac ama wac gambaleelka albaabka si looga hortago dhammaan xiriirrada aan loo baahnayn.
WADAyaasha CAAFIMAADKA: Waxaan ka codsaneynaa darawalada inay u soo wacaan isuduwayaasha goobta, sida ugu dhakhsaha badan, haddii aysan awoodin inay baabuur kaxeeyaan maxaa yeelay caafimaad ma dareemayo.
Waxaan kaa codsaneynaa inaad guriga iska joogto haddii aad haa kaga jawaabto mid ka mid ah su'aalahan soo socda:
Qandho ma leedahay?
Miyaad qufacaysaa, hindhisaysaa, mise duuf ayaa kaa haya?
Ma jiraa qof reerkaaga ah oo leh astaamahan?
Adiga ama qof reerkaaga ka mid ah xiriir dhow miyaad la yeelatay qof qaba ama ka shakisan inuu qabo COVID-19?
Ma u baahanahay maaskaro si tabaruc ah?
Waxaan ka codsaneynaa mutadawiciinta Jikadayada Fursadaha inay xirtaan waji-waji. Haddii aadan lahayn waji waxaan ku leenahay waji-gashiga jikadayada si aad ugu isticmaasho.
Weli ma u baahan tahay mutadawiciin dheeraad ah oo kaa caawiya dhalmada?
Haa. Waxaan u baahan doonaa dhammaan caawimaadda aan heli karno si aan u hubinno in gaarsiinta ay ku sii socoto faafitaanka. Haddii aad caawin karto, fadlan saxiix si aad u noqoto tabaruce wicitaan. Caawimaaddaada looma baahna in isla markiiba loo baahdo, laakiin waxaan fileynaa inaan u baahan doono mutadawiciin cusub inta cudurku socdo.
Waxaan dhawaan iska diiwaan galiyay iskaa wax u qabso. Goorma ayaan filanayaa inaan bilaabo?
Waxaan soo marnay tiro layaableh oo mutadawiciin cusub ah oo isdiiwaangaliyay toddobaadyadii la soo dhaafay waxaanan filaynaa inaan u baahanahay dhammaantood mar uun. Waxaan si taxadar leh uga shaqeyneynaa inaan isbarbar dhigno mutadawiciinta fursadaha furan, laakiin waa macquul in lagugu daro liiska sugitaanka marka fursadaha cusubi furmayaan. Waad ku mahadsantahay DULQAADKAAGA. Ogow in laguu qaddarin doono loona baahan doono in lagaa caawiyo markii waqtigu yimaado!